AKHRISO: Dowlada Soomaaliya oo Jawaab Deg Deg ah Ka bixisay eedeynta cusub ee Kenya - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
AKHRISO: Dowlada Soomaaliya oo Jawaab Deg Deg ah Ka bixisay eedeynta cusub ee Kenya
Jun 7, 2019 - Comments off
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa jawaab deg deg ah ka bixisay warbixin uu qoray wargeyska Standard ee laga leeyahay dalka Kenya taasoo lagu sheegay inay Dowladda Soomaaliya deegaannadii ay sahminta shidaalka ka sameysay ay ku darsatay deegaanno ka tirsan Kenya.
Waxa uu sheegay Wargeysku in Wasaaradda Batroolka Soomaaliya soo bandhigtay shidaal in laga baarayo 15 toban xirmo oo ku kala yaalla Galmudug, Hirshabeelle iyo Xeebaha Lamu sida ay hadalka u dhigtay Kenya.
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu warkaas yahay mid been abuur ah aysana jirin xirmooyin saliidda Lamu inay dowladda Soomaaliya ku soo dartay sahankii la sameeyay.
HALKAN RIIX KA DAAWO WARARKA OO MUUQAAL AH
” Ma jirto meel ka tirsan Kenya oo lagu soo daray warbixintii la xiriirtay sahanka shidaalka oo ay soo saartay Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Xukuumadda Soomaaliya” ayuu yiri Cabdulqaadir Abiikar oo la hadlay warbaahinta .
Wasaaradda ayaa caddeysay in sahanka Shidaalka ee la sameeyey Soomaaliya uu ku egyahay Xeebaha ku yaal Koonfurta illaa bartamaha oo ku eg Deegaanada Galmudug.
Cabdulqaadir Abiikar ayaa ka digay in Bulshada lagu marin habaabinayo warbixino sida uu warka u dhigay ah kuwa been abuur ah.
Spectrum oo ah shirkaddii sameysay sahanka shidaalka Soomaaliya ayaa horey u beenisay sheegashada dowladda Kenya ee ah in dhulkeeda lagu soo daray sahanka Shidaalka ee laga sameeyey Soomaaliya, waxayna shirkadda si gaar ah usii xustay xataa inaysan sahminta ku jirin aagga hadda lagu muransan yahay ee yaalo Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah.